Barnaamijka Gargaarka Kirada ee COVID-19
Soo Koobidda Brograamka
Brograamka Kaalmada Kirada COVID-19 (COVID-19 Rent Relief Program) waxaa loogu talogalay kireysteyaasha aan awoodin in ay bixiyaan kirada laga rabo taasoo ugu wacan dilaaca cudurka COVID-19. Brograamkaan wuxuu ku balaartaa brograamyada kaalmada kirada la soo dhaafay ee MaineHousing. Waxaad dalban kartaa brograamkaan la balaariyay xattaa haddii aad horay u dalbatay aadna qaadatay maaliyad. Brograamkaan waxaa iminka ku jira dad ku nool hanti ay maalgeliso MaineHousing mana qabaan fojarka Section 8 ama qaataan kaalmo kale ay dawladda ku bixiso kirada.
Brograamkaan waa hadba sida loo soo kala hormaro, wuxuuna kaalmo ka geysan karaa bixinta kirada Oktoobar, Nofeembar, iyo Diseembar. Waxaad dalban kartaa ilaa $1,000/halkii bil, xattaa haddii aad qaadatay maaliyad wareegyada kale brograamka.
Waxaad dalban kartaa kirada Oktoobar iyo Nofeembar laga bilaabo Nofeembar 2, 2020. Arjiyada brograamka Diseembar waxay bilaaban doonaan Nofeembar 23, 2020.
Kireesteyaasha ayaa dalbada kaddibna manaafacaadka waxaa toos loo siiyaa milkiilaha hantida/shirkadda maamulka hantida. Milkiileyaasha hantida/maamuleyaasha hantida waxay waafaqsan yahiin in ay gadaal u dhigaan baaqiga lacag bixinta, ma caffiyaan, marka ay waafaqaan in ay ka qeybgalaan. Milkiilaha hantida/maamulaha hantida wuxuu kaloo waafaqsan yahay in uusan dibadda kuu saarin haddii aad bixin weyso kirada bisha (bilaha) lagu dabaqay Kaalmada Kirada COVID-19.
**Xasuusin: Fadlan qor liiska macluumaadka ugu fiican ee lagaala soo xariiro adiga iyo milkiilahaada/ maamulaha hantida marka aad dalbaneysid.
Dakhliga iyo Maalka:
Waxaa dhici karto in aad xaq u yeelatid haddii dakhliga ku soo galo bil kasta uu u dhexeeyo heerarka dakhliga ku qoran jadwalka hoose. Heerarkaan waxay ku saleysan yahiin tirada reerka iyo dagmadaada. Haddii aad awoodid in aad kiradaada ka bixisid dakhli, nooc kasta ha ahaado, ama in aad ka bixisid keyd ama hanti kale oo caddaan ah, xaq uma lihid.
Lewiston waxay leedahay brograam u gaar ah oo ku saabsan kaalmada kirada. Haddii aad daggan tahay Lewiston, waa in aad dalbatid brograamkaas. Waxaad heli kartaa marka aad riixdid halkaan
Awoodda Lacag Bixinta: Waxaa dhici karto in aad xaq u yeelatid haddii aadan awoodin in aad bixisid kiradaada taasoo ugu wacan daruufaha toos ahaan ula xariira dillaaca cudurka COVID-19. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah balse kuma eka:
shaqada oo lagaa fadhiisiyo;
meesha aad ka shaqeysid oo la xero;
yareynta saacadaha shaqada;
in aad guriga joogtid si aad u xanaaneysid caruurtaada;
ama dakhli kale oo luma taasoo ugu wacan dillaaca cudurka COVID-19.
Waa Laga Reebay Qaar ka mid ah Guryaha la Kabo:
Xaq uma yeelan doontid haddii aad:
Qaadatid Fojarka Section 8
Daggan tahay abarmanada Section 8
Kaalmada Kirada ka qaadatid Horumarinta Miyiga USDA (USDA Rural Development)
Daggan tahay guryaha dadweynaha
Kirada Guryaha Yaryar ee Lala Guuri Karo:
Haddii aad leedahay guri yar oo lala guuri karo aadna dhul ka kireysatay meelaha lagu suro, waxaa dhici karto in aad xaq u yeelatid brograamkaan. Haddii aad xaq u yeelatid brograamka, taasi waxay quseysaa kirada dhulka ama kirada guriga lala guuri karo. Kuma jiraan khidmadaha goobta.
Intee ayuu brograamka bixin doonaa?
Waxaa dhici karto in brograamka bixiyo ilaa $1,000 bil kasta halkii reer bilaha Oktoobar, Nofeembar, iyo Diseembar.
Sidee ayaan u dalbadaa?
Tag mainehousing.org/covidrent. Riix Arjiga Kaalmada Kirada COVID-19 ee 2020. Dooro dagmada aad daggan tahay, buuxi arjiga, kaddibna gudbi sida lagu faro. Haddii aadan haysanin kombuyutar aad ka gashid, wac Wakaaladaada Hawsha Bulshada (Community Action Agency) deegaanka. Waxay ku qoran yahiin hoos.
Hay'adda Deegaanka Ceymiska Telefoon
Intee jeer ayaan dalban karaa? Ma dalban karaa kirada leyska rabo isla bisha lagu jiro mise waxaan dalban karaa kirada horay leysaga rabay keliya?
Waxaad dalban kartaa kirada Octoober iyo Nofeembar isla mar, ilaa iskudarka ugu badan ee $2,000 (inta ugu badan $1,000 halkii bil). Haddii aad weli u baahan tahay kaalmo xagga bixinta kiradaada bisha Diseembar, waxaad dalban kartaa Nofeembar 23, 2020.
Maxaa dhaca hadii kiradeyda aysan ahayn $1,000. Maxaa dhaca haddii ay ka badan tahay? Maxaa dhaca haddii ay ka yar tahay?
Haddii kiradaada ka yar tahay $1,000 bil kasta, milkiilaha hantida/maamulaha hantida wuxuu heli doonaa jeeg la xariira xisaabta dhabta ah kiradaada. Haddii kiradaada ka badan tahay $1,000, fadlan kala hadal milkiilaha/maamulaha hantida sida loo helo qorshooyin kale oo ku saabsan lacag bixin kala duwan. Manaafacaadkaan waxay leedahay waxtar hase ahatee waa in aad weli bixisaa inta ka hartay kiradaada.
Haddii xisaabta ugu badan $1,000 tahay dhamaan inta aan bixin karo iminka, ma leyga saari doonaa guriga?
Lagaama saari doono guriga bisha uu milkiilaha hantida/maamulaha hantida kaa ogolaado in uu kaa qabto lacagta. Marka uu ogolaado lacagta, iyaga waxay waafaqsan yahiin in aysan dibadda kuu saarin marka aad bixin weyso kirada bisha lacagta la bixiyay. Badbaadadaan in aan lagaa saarin guriga ma quseeyso ka-saaridda ka dhallato u-hoggaansami la'aanta qodobada kirada ama bixin la'aanta kirada bilaha kale aan hoos imaanin brograamkaan.
Ma loo baahan yahay in aan u sheego milkiilaha hantideyda/shirkadda maamulka hantida in aan dalban doono?
Haa. Isgaarsiinta ka dhexeyso adiga iyo milkiilaha hantidaada/maamulaha hantida aad ayay muhiim u tahay. Inta badan ma rabaan in ay lumiyaan dagganeyaasha wanaagsan, sidaas darteed isgaarsiinta wanaagsan waxay leedahay kaalmo. Waxaa kaloo muhiim u ah iyaga in ay ogaadaan in aad dalbatay maxaa yeelay waxaa laga rabaa in ay buuxiyaan warqadaha si aad u qaadatid maaliyadaan.
Sidee looga shaqeyn doonaa arjiga? Sidee ayaa kharashka loo siin doonaa milkiilaha hantida/shirkadda maamulka hantida?
Marka aad gudbisid arjigaada, Wakaaladda Hawsha Bulshada (Community Action Agency) deegaanka ayaa ka shaqeyn doonto arjiga. Iyaga ayaa toos kuula soo xariiri doono si loo xaqiijiyo macluumaadka ku qoran arjiga. Kaddibna waxay la xariiri doonaan milkiilaha hantida/maamulaha hantida. Marka milkiilaha hantida waafaqo kaddibna buuxiyo warqadaha loo baahan yahay, Wakaaladda Hawsha Bulshada (Community Action Agency) waxay toos lacagta u siin doontaa iyaga. Waxaa aad muhiim u ah in la xasuusto in aan la bixin doonin lacagta ilaa arjiilaha ka soo gudbiyo dhamaan warqadaha loo baahan yahay lana gaarsiiyo milkiilaha hantida/maamulaha hantida.
Ilaa intee ayuu brograamka socon doonaa?
Brograamka wuxuu socon doonaa ilaa maaliyadda ka dhamaato ama ilaa brograamka ka dhamaado.
Maxaa dhaca haddii milkiilaha hantida/shirkadda maamulka hantida aysan ka qeybgelin?Waxaan rajeyneynaa in milkiileyaasha hantida iyo shirkadaha maamulka hantida ka qeybgeli doonaan brograamkaan iyo in ay ogoladaan lacagta. Hase ahatee, ma jiraan wax aan ka qaban karno oo aan ka dalban karno iyaga in ay ka soo qeybgalaan.
Arjiga Gargaarka Ijaarka ee 2020 COVID-19
Barnaamijka Ilaha (RES)
Brograamka Gargaarka Kirada COVID-19 - La Ballaariyay Su'aalaha Badanaa Leys Weydiiyo
Maamulka Guriyeenta Maine ee Gobolka Maine ("MaineHousing") ma samayso wax takooriyo ah ee ku saleysan jinsi, midabka, diinta, lab/dhedig, nooca galmada, aqoonsiga jinsiga ama muujinta, xaalada guurka, asal qaran, isirka, naafonimada jirka ama maskaxda, da'da, xaalada qoyska ama helitaanka gargaarka guud ee gelitaanka ama gelitaanka ama daaweynta barnaamijyada iyo howlaha. Dhanka shaqada, MaineHousing ma samayso wax takoor ah oo ku saleysan jinsi, midab, diin, jinsi, hanuuninta galmada, aqoonsiga jinsiga ama muujinta, asal qaran, isirka, da'da, naafada jirka ama maskaxda ama macluumaadka hidaha. MaineHousing waxay si haboon ay bixin doontaa kaalmo ku caawinta isgaarsiinta iyo adeegyada ku habboon ogeysiis wakhti ku filan ah. MaineHousing waxay sidoo kale waxay dukumintigan sidoo kale ku bixin doontaa qaabab kale markii la helo ogeysiis ku filan. MaineHousing waxay mas’uuliyadda u xilsaartay qofka soosocda inuu mas'uul ka yahay iskuduwaridka u hogaansanaanta shuruudaha takoorida dowlada dhexe iyo gobolka iyo xalinta cabashada: Louise Patenaude, Maine State Housing Authority, 26 Edison Drive, Augusta, Maine 04330-4633, Lambarka Telfoonka 1-800-452-4668 (cod qabte kaliya), (207) 626-4600 (cod) ama Maine Relay 711.